​Farole oo ka hadlay shirka ay la qaateen Michael Keating
Ergayga gaarka ah QM oo si taxadar leh u dhagaysanay khudbadda Farole
Maxamed Cabdi Afey Safiirka IGAD ee Somalia
GAROWE- Madaxweynihii hore Puntland Cabdiraxman Sheekh Maxamed Maxamud Farole, ayaa ka hadlay kulan ay la qaateen Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Somalia Micheal Keating, wuxuuna sheegay inay ula tageen qoraal ka hadlay waxyaabaha la isku hayo ee khuseeya doorashada dalka Somalia 2016 ka dhacaysa.
Farole, wuxuu tilmaamay in qoraalkooda ku muujiyeen in dowladda Somalia ku fashilantay hogaaminta dalka islamarkaana nidaamkan uusan ahayn mid la aqbali karo, maadama dowladda hadda Somalia ka talisa laga sugayay in dalka gaarsiiyo doorasho cod iyo qof ah, balse taa badalkeeda ku laabatay habka qabaliga ah ee laga soo gudbay.
Nidaamka 4.5, ayuu madaxweynihii hore sheegay inuu yahay olole ay wataan hogaamiyaasha ku fashilmay siyaasadda dalka, isagoo xusay intii karaamkooda ah inay ka shaqeeyeen maslaxadda iyo hormarka umadda Somaliyeed.
Wuxuu intaas ku daray in dhammaan shacabka iyo dowladda Puntland isku mowqif ka yihiin arrinta ku addan doorashada dalka iyo habka ay isku raaceen dowladda Federalka, beesha caalamka iyo maamullada dalka qaybtood, wuxuuna Farole ku sifeeyay qaadashada habkan ee maamulka Jubbaland inay sababtay duruufaha ku xeeran ee aysan shacabku raali ka ahayn.
Hadalka Madaxweynihii hore Puntland ayaa kusoo beegmay xilli magalada Garowe kasocdaan kulamo u dhaxeeya bulshada qaybaheeda kala duwan iyo wafdiga kasocda beesha calamka, waxaana shirarkaasi salka ku hayaan qaabkii dadka reer Puntland looga dhaadhicin lahaa inay qaataan 4.5, waloow dhammaan xubnihii uu la kulmay Keating ay qaateen mowqif isku mid ah.
​Puntland: Farole iyo Keating oo Garowe ku kulmay
Puntland 10.02.2016. 14:09
GAROWE- Waxaa maanta magalada Garowe ku kulmay Madaxweynihii Puntland Cabdiraxmaan Farole iyo Ergayga gaarka ah Qaramada Midoobay u qabilsan Arrimaha Somalia Michael Keating iyagoo kawada hadlay xaaladda Somalia iyo aragtida ay ka qabaan nidaamka la sheegay in lagu sala ...
​Farole "Waxaan isu sharaxay si aan wax uga qabto 4.5"
Puntland 04.04.2016. 11:00
​Isimada Puntland oo beesha caalamka ka diiday 4.5
Puntland 10.02.2016. 15:47
​Tamarta Cad-ceedda laga dhaliyo oo Garowe laga hirgaliyay
Puntland 22.02.2016. 14:15
​Puntland: Ergayga Midowga Yurub oo Garowe kulamo ku qaatay
Puntland 15.02.2016. 19:20
Dowlada Somalia oo loo gudbiyey qodobo Dastuurka laga badaley
Soomaliya 14.02.2016. 08:57
​Madaxweynaha Somalia oo Puntland ugu hambalyeeyay qaadashada 4.5
Soomaliya 03.04.2016. 12:59